May Nyane: မြသီလာရဲ့ အဝေးမှာ…
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အန်တီစုလည်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်.. ကလေးတွေ ငိုမှ ပျော်တတ်တဲ့ လူကြီးတွေဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ …။ အဲဒီအကျင့်မျိုးလည်း ကျမတို့
တိုင်းပြည် မှာပဲ တွေ့ရတယ် ထင်တာပဲ)။
ကျမ ကလေး အမေ လက်တွေ့ တွေရှိနေရပါသည်။
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ဆရာမရယ် ။ တကယ်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။
ဆရာမမေငြိမ်းကို အမြဲတန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းလေးထဲ အခုတော့ နေရာမှန်ရောက်သွားပြီ ထင်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကို ပယ်ပြီး ကောင်းတဲ့အကျင့်
စရိုက်တွေကိုဘဲ လေ့ကျင့်သင်ယူသွားမယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်...
ဗမာတွေကဟုတ်တယ်အမရယ်...သူတို့က ကိုယ့်ဗမာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မ ကိုက်ညီတဲ့ အမေရိကန်ဆန်တာကိုတော့ လက်ခံကျင့်သုံးတတ်ကြပြီး
ကောင်းတဲ့အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ထုံးတမ်စဉ်လာနဲ့ အမေရိကန်ဆန်မှုကိုတော့ အတုမခိုးတတ်ကြဘူး...
နောက်ပြီး တချို့  ဗမာတွေပြောတာရှိသေးတယ်...
အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ ကျွန်မတို့ကတော့ ဗမာဆိုရင်
ဗမာဇာတိပြပြီး တွေ့ရတော့တာဘဲ...အဲလိုပြောတဲ့သူတွေကိုတော့ တော်တော်ရီချင်တယ်...
မြန်မာတွေမှာ တော်တဲ့ဥာဏ်ရှိပေမဲ့. စဉ်းစားတတ်တဲ့ဥာဏ် အင်မတန်နည်းပါတယ်.. မနာလိုတဲ့စိတ် သူများကို ကျောတတ်တဲ့ စိတ် ပိုများတယ်.. အမေရိကန်လူမျိုးတွေတောင် အဲဒီလို စိတ်ဓာတ်မျိုး မရှိကြပါဘူး. ကောင်းတဲ့ အပြုအမူကို အတုမခိုးပဲ မကောင်းတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို အတုခိုးတဲ့ မြန်မာတွေကိုပဲ စိတ်ပျက်မိတယ်.. အဲဒီမန်နေဂျာမလေးက သူ့ကို ဖားတာ လိုချင်လို့နေမယ်.. နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ နေပြီး ဖားတာခံချင်နေရင်တော့.. နအဖလက်အောက် ပြန်သွားနေဖို့ကောင်းတယ်.. စိတ်မထားတတ်လို့ပါ.. တူသောအကျိုးပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်.
တီချယ်ကလဲ နင့်မှာ လက်မပါဘူးလား လို့ ပြောလိုက်ပါလား ကြားရတာတောင် တော်တော်ဒေါသထွက်တယ်
သမီးစိတ်နဲ့ဆိုရင် အမိူက်နဲ့မျက်နှာနဲ့ ကောက်ပေါက်ပြီးသားပဲ
ကန်တော့ တီချယ်ရေ စာဖတ်ပြီးတာနဲ့ ဒေါသထွက်လာတယ် တကယ်..
ဆရာမရေ ဒီလို တယောက်နဲ့ တယောက် ကျောတတ်တာ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပဲ ရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်ပဲလို့ ကျွန်မထင်တယ်။ ဒီမှာလည်း ဗမာ နှစ်ယောက် ရှိတဲ့ အလုပ်ခွင်ဆို အဲဒီနှစ်ယောက် တခါမှ မတည့်ကြဘူး။ သုံးယောက်ရှိရင်လည်း နှစ်ယောက်နဲ့ တယောက် မတည့်တာ အမြဲကြားရတယ်။ ဗမာရှိတဲ့နေရာမှာ အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးလို့ ဗမာတွေကြားမှာပဲ အမြဲကြားနေရတယ်။ ကျွန်မ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာတော့ ဗမာဆိုလို့ Staff ထဲမှာ မပြောနဲ့ လူနာထဲမှာတောင် ၄-၅ နှစ်ကြာမှ တယောက်လောက်ပဲ တွေ့ဖူးတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မမှာ ဒီပြဿနာ မကြုံဖူးဘူး။ ရောက်ခါစကဆိုရင် ယောက်ျားက အခုဆရာမပြောသလိုပဲ အမြဲကြုံရတယ်။ ကျွန်မယောက်ျားလည်း မြန်မာပဲဆိုတော့ ဒီလိုစိတ်ဓါတ် ရှိရင်ရှိမှာပဲ။ ကျွန်မကလည်း ကျောင်းတက်ပါလို့ ပြောတာ ကျောင်းမတက်ပဲ အဲဒီလိုလူတွေနဲ့အတူ အလုပ်သွားလုပ်တော့ တန်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာ တန်ရာမိတ်ဆွေနဲ့ ဒီလို တန်ရာ အတွေ့အကြုံတွေပဲ ရမှာပေါ့လို့ ပြောဖူးတယ်။ ကျွန်မက ဘာပဲပြောပြော လုပ်ပဲလုပ်လုပ် အမြဲတမ်း ကိုယ်ပြေတာ လုပ်တာကို ပြောပြီးလုပ်ပြီးရင် ပြန်သုံးသပ်တတ်တော့ ကျွန်မ ပြောလိုက်တဲ့ စကားထဲမှာကိုက အဲဒီလို မကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်က ပါနေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ဓါတ်ကိုပါ ကိုယ်ပြန်ပြင်ရတယ်။ အဲဒီလို နှိုင်းယှဉ်ပြီး အဆင့်အတန်း ခွဲခြားတတ်တာဟာ ကျွန်မတို့ အာရှသားတွေနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပဲ ကျွန်မတွေ့ရတယ်။ အာရှမှာတောင်မှ မြန်မာတွေက အဆိုးဆုံးပဲ။ အနောက်နိုင်ငံသားတွေမှာ အဆင့်အတန်း ခွဲခြားတာ အဲဒီလောက် မတွေ့ရတာ အမှန်ပဲ။ ကျွန်မ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရောက်မှ ကောင်းတာကို တုခိုးပြီး ကိုယ့်မှာ မသိမသာ ရှိနေတဲ့ မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေ ဥပမာ ကိုယ့်ကို တယောက်ယောက်က ဆန့်ကျင်ပြီး ပြောတာကို စိတ်တိုတတ်တာမျိုးလို မကောင်းတဲ့ စိတ်ကို ပြန်ရှာပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ပြန်ပြင်ရတာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ် ဆရာမ။
ဆရာမရယ်.. ဖတ်ရတာရင်မောသွားတယ်... စိတ်မကောင်းရင်းနဲ့ဘဲ ဆက်ရန်ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်
အဲဒီ ဗမာမလေးက ဘယ်လိုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်မျိုးနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တာလဲလို့ တွေးနေမိပါတယ်...။
သူတို့ ဘာကို ကြောက်ရမယ်ဆိုတာ မသိကြဘူးနော်...
So sorry to heard, but most of them are like that, anyway waiting some more post about "Far aWay from Mya ThiLar"
ဒေါသပါဖြစ်တယ်။ လူမျိုးစရိုက်လိုပါဖြစ်နေတယ်လို့ 
သတ်မှတ်ခံရတော့ ပိုစိတ်မကောင်းဘူး..။ ဆရာမစာ
အမရေ အရမ်းကိုကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ညီမအလုပ်ထဲ မှာတုန်းကလည်း အဲလိုလူကြီးတွေနဲ့ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုနိုင်ထက်စီးနင်းခိုင်းပြီဆို လုံးဝနိုင်ငံခြားသားဖြစ် မနေဘဲ ဗမာလူကြီးတွေကပဲ ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲ ဆိုတာမျိုးတွေးမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညီမကတော့ အငယ်ဆိုတော့ခံသာပါတယ်။ ဒါတောင် လူကွယ်ရင် မျက်ရည်ကျခဲ့ပါသေးတယ်။ အမကျတော့ ပိုခံစားရမှာ။ လူတွေကဘာကြောင့် ကိုယ်သာဆိုရင်ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတွေးမပေးကြတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့မရဘူး။
နိုင်ငံခြားသားက ရင့်တာခံရရင် သူတို့တိုင်းပြည်မှာမို့လို့ ဖြေတွေးလို့ရသေးတယ်။ အခုတော့ ....
မနာလိုတတ်တဲ့စိတ်ကလည်း တော်တော်လေးကြီးတာ သတိထားမိတယ်။ စိတ်ပျက်မိတယ် ဆရာမရယ်။
သည်ရောက်လာတော့ ပိုက်ဆံကိုပဲ ဂရုစိုက်ကြတာကိုးလေဗျာ...
လူကို စိတ်ထဲထားကြတာမှ မဟုတ်တာ...
အဲဒီလို မြန်မာ၊ မြန်မာချင်း အနိုင်ယူ၊ ပညာပြတဲ့ အကြောင်းတွေ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ကြားရတွေ့ရတာ အံ့သြစရာပဲ အမရေ...။
ကိုယ့်လိုပဲ လာနေကြတဲ့ တခြားလူမျိုးတွေကို ကြည့်ရင် အဲဒါမျိုး မတွေ့ရဘူး၊ သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာ ပြေပြေ လည်လည်ပဲ၊
စိတ်သဘောကောင်း၊ ဖော်ရွေယဉ်ကျေးပါတယ်လို့ ပြော တတ်ကြတဲ့ မြန်မာတွေမှာ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ဒီလိုစိတ်တွေ ရှိနေကြသလဲဆိုတာ မတွေးတတ်ဘူး။ Cause ကတစ်ခုမက ရှိနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့...။
လဲကျတိုင်းမှာ အမ ပြန်ထ,နိုင်ပါစေ....။
နောက်ဆို ဒီလိုခေါင်းစဉ် မတပ်ပါနဲ့ 
ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ပြီးတာနဲ ၇င်ထဲမြေ့ သွားလို့ ပါ
university ကို ၆လ ဘဲ တက်ဘူးပါတယ်
အိမ်နဲ့ ဝေးတာ ၁၅ နှစ်ရှိပြီ..
မိဝေး ဘဝေးမှာ နေလို့ ဝပြီ ဆ၇ာမရယ်
sa yar ma,
I feel so sad. Most of burmese are like that. I also don't understand why. Now I can handle that it is life.
ဆရာမ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်ပြန်မြင်နေရတဲ့ ဘဝ ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို အရမ်းသဘောကျတာပဲ။
ဆရာ မpost ကိုဖတ်ပြီး ဆရာမနည်းတူလိုက်ခံစားလိုက်ရတယ်။ စိတ်မကောင်းဘူး။
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ မြန်မာတွေ ဘာလို့များ အချင်းချင်း အဲဒီလိုစိတ်မျိုးထားပါလိမ့်လို့ အမြဲတွေးမိပါတယ်။
မေလေးကိုယ်တိုင်လဲ မြန်မာအချင်းချင်းဘဝပျက်လောက်အောင် ယုတ်မာကြတဲ့ သူတွေ ကြုံဖူးပါတယ်။
တနေ့ကဘဲတယောက်နဲ့ ဂျီတော့မှာ ပြောရင်း မစုမွန်နဲ့ဗျူးထားတာ ပြောတာပါ။
အဲဒီ အစ်မကဘာပြောလဲဆိုတော့ ညည်းကမြန်မာအစစ်မှာမဟုတ်ဘဲ မျိုးချစ်စိတ်တွေ ဘာတွေ လာပြောမနေပါနဲ့။ လူတွေကို အပိုတွေ ရေးပြမနေနဲ့တဲ့။
မြန်မာတွေ စိတ်ဓါတ်မရင့်ကျက်ကြဘူး ပြောရင်လဲ ကြိုက်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး ဆရာမ။
အစ်မရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာရော မငယ်နိုင် ရေးထားတဲ့ comment ရော စိတ်ဝင်စားဝရာ တွေးစရာကောင်းပါတယ်။
(ဥပမာ ကိုယ့်ကို တယောက်ယောက်က ဆန့်ကျင်ပြီး ပြောတာကို စိတ်တိုတတ်တာမျိုးလို မကောင်းတဲ့ စိတ်ကို ပြန်ရှာပြီး)
ဆိုတာကို ဖတ်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးမိပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ချစ်လှချည်ရဲ့ လို့ အော်အော်နေတတ်တဲ့ လူတွေထဲ ဒါမျိုး တွေ့ဖူးလို့ပါ။ ထားပါလေ။
ဒီ post ကို တင်တဲ့နေ့တည်းက ဖတ်ပြီးသားကို ခုမှ comment လာတင်ရတယ်။
၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်တွေ ကြုံရတာ ဖတ်မိတိုင်းမှာ အစ်မတော့ အကြွေးပေးစရာ ရှိတာတွေ လျော့လျော့သွားပြီလို့ပဲ စိတ်ထဲမှတ်ပြီး ဖတ်မိပါတယ်။
မ ရေ… သေသေချာချာဖတ်ပြီး ရင်ထဲနင့်နေအောင် ခံစားသွားမိပါတယ်… တဆက်ထဲ နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးရတဲ့ ကိုယ့်သားလေးကို ကြီးသူကိုရိုသေ၊ ငယ်သူကိုသနား၊ ရွယ်တူကိုလေးစားတတ်တဲ့ အကျင့်လေးအရိုးစွဲအောင် အထပ်ထပ် ဆုံးမမှလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးမိတယ်… မ ရေ… ဒါမျိုးဆန်ဆန်အဖြစ်လေးကို ကျွန်မ အာအိုင်တီကျောင်းသူဘ၀မှာ မြင်ခဲ့ဖူးတယ်အမ… ကျွန်မတို့ နှစ်က ပို်က်ဆံအရမ်းရှိတဲ့ မောက်မောက်မာမာ ကျောင်းသူတယောက်က ကျွန်မသူငယ်ချင်းဆီက လက်ကိုင်ပုဝါကို ငှားပြီး နှပ်ညှစ်ပြီး ပြန်ပေးတာ မျက်စိရှေ့ တင်တွေ့ ခဲ့ဖူးတယ်… ဘာသဘောနဲ့ လုပ်သလဲတော့မသိဘူး… ကာယကံရှင်မပြောနဲ့ကျွန်မတောင် တဆတ်ဆတ်တုန်တယ် မ ရယ်… ကျွန်မသူငယ်ချင်းက ပထမတော့ ငြိမ်ခံနေပေမယ့် နောက်မှ သတိရပြီး လက်ကိုင်ပုဝါကို လွှင့်ပစ်ခဲ့တယ်… မ ရေ… အဲဒီမောက်မာတဲ့ကျောင်းသူကို ယနေ့ ထက်ထိ ဘယ်လိုမှ အထင်ကြီးလို့ မရတော့ဘူးလေ… မ ရေ… လူမှုဆက်ဆံရေးဝမ်းစာတွေပေါ့နော်... စကားမစပ် ပန်းပန်တတ်တဲ့ မ ပိန်းပန်းလေးပန်တယ်ဆိုတာ ဖတ်ရတော့ ပြုံးမိတယ်… ကျွန်မ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးတဲ့နေ့ က ပန်းမ၀ယ်ထားမိ၊ ပန်းပန်တာလဲ ၀ါသနာပါသူမို့အမေ့ခြံထဲက ပိန်းပန်းလေးပန်ခဲ့တာ သတိရမိတယ်…
အဲဒီအခါ ခုချိန်ထိတိုင်အောင် “ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်မပေးရတဲ့.. ကိုယ့်ကိုလည်း ဘာမှထိခိုက်သွားမှာ မဟုတ်တဲ့ သူတပါးရဲ့ အကျိုးစီးပွား ရရာရကြောင်းကို ပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်… မနာလိုတဲ့ စိတ်.. ဘာလို့ ကျမတို့ လူမျိုးမှာမှ များရသလဲ ဆိုတာကိုတွေးပြီး နားမလည်ဖြစ်နေတုန်းပါ။............. that's so true Sayama... i also face that kind of things... when i read your i gotalot of good things :) thank you